Malunga nathi -Wilongda Technology Co., Ltd.
I-Wilongda Technology Co, Ltd. ngumvelisi weendawo ezahlukileyo zemoto emva kweemarike, isitshixo semoto esingenanto, amaqhosha e-transponder, irimothi elawula izinto ezingaphezulu kwama-60 zeemoto ezinkulu ezine-Audi, BMW, Mercedes, Volks Wagen, Renault, Peugeot , I-Citroen, Fiat, Ford ...
● Ukuqinisekisa uMgangatho.
● Tshatisa iShedyuli yakho.
● Sebenzela uHlahlo-lwabiwo mali.
"Umgangatho bubomi bethu, inkonzo ngumphefumlo wethu!" yinkolelo yenkonzo yethu. Ngokusekwe kubuchwephesha obuphambili, ukusebenzisana kunye nobuchwephesha, sikwalawula iindleko ngolawulo lwethu oluphambili, ukuze sikwazi ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nexabiso elifanelekileyo. Sijonge ekunikezeleni ngeyona nkonzo inokuthenjwa kunye neyobungcali kubathengi bethu abahloniphekileyo kwihlabathi liphela.
I-Wilongda Technology Co, Ltd ilandela umgaqo-nkqubo weshishini "woMgangatho ungaphezulu kwayo yonke into, inkonzo yenza ikamva", kwaye ilandele umgangatho wodidi lokuqala kunye nophuhliso lwetekhnoloji. Ngokuqhubeka kokuphuculwa kolawulo lwequmrhu kunye neenzame ezingagungqiyo ekufuneni ukuseka ubudlelwane bexesha elide, sinikezela abathengi bethu ngeemveliso eziphambili kunye neenkonzo. Siza kuqhubeka nokuphuhlisa kwaye sivelise iimveliso ezingaphezulu kunye ezingcono kubathengi abaxabise umgangatho kunye nomfanekiso wohlobo.
Ngophuhliso olukhawulezileyo lweshishini eliphambili lemoto, siya kulandelela ngokusondeleyo ukuphuculwa kobuchwephesha bokubonisa ubuchwephesha behlabathi, ukuba sengqiqweni kunye nokuyila, kwaye siphucule rhoqo!
Abathengi bamkelekile ukubuza kunye noku-odola iimveliso zethu.
Ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nokuqeqesha abasebenzi abakumgangatho ophezulu.
Khokela uphuhliso lweshishini leLCD kwaye ube ngumenzi wokuqala weklasi yezitshixo zemoto! )
Ukujolisa ebantwini, kufuna inyani kwiinyani, ukukhuthaza izinto ezintsha, kunye nokugqwesa rhoqo)
(Ifilosofi yeshishini: --- Umgangatho ophezulu, ukuvelisa izinto ezintsha, ukuthembeka, kunye nokuqina
Umgangatho ophezulu: bonelela ngeemveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo zobugcisa
Ubuchule: Ukusetyenziswa kwetekhnoloji entsha kunye nokudala okuqhubekayo kweemveliso ezintsha kunye neetekhnoloji
Ingqibelelo: Ishishini sisiseko sophuhliso lweshishini. Ngaphandle kwengqibelelo, akukho nto
Ubungqongqo: Zifunele ngokungqongqo, siphatha ubudlelwane babathengi ngononophelo, kwaye sinike abathengi iimveliso ezisemgangathweni kunye neenkonzo zobugcisa